Hyaluronic Acid အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Hyaluronic acid ကိုရီးယားမ​လေး​တွေ မျက်​နှာဝင်းပြီး ကြည်​ကြည်​ ​ပြောင်​​ပြောင်​​လေး ဖြစ်​ဖို့ ​အသုံးပြုတဲ့ဟာပါ
How about Shenjing Hyaluronic acid?
Shenjing ရဲ့ Hyaluronic acid ကျ​တော့ ​ရွှေ​ရောင်​ ပုလင်း ကိုးပုလင်းနဲ့ ​ငွေ​ရောင်​ပုလင်းကိုး ပုလင်းဆိုပြီး 1 box မှာ ပါပါ တယ်​ ​ငွေ​ရောင်​ ပုလင်းက ​ရေဓာတ်​ဖြည့်​​ပေးပြီး ​ရွှေ​ရောင်​က​တော့ မျက်​နှာကို အာဟာရဖြည့်​​ပေးတာပါ
ဒီ​နေ့ ​ငွေ​ရောင်​ ပုလင်း ကို လိမ်းရင်​ ​နောက်​​နေ့ ​ရွှေ​ရောင်​ပုလင်းကို လိမ်း​ပေးရမှာပါ ညဘက်​ လိမ်းတာ ပို effect ဖြစ်​ပြီး customer ​တွေရဲ့ feedback အရ make up မလိမ်းခင်​ သုံး​ပေးရင်​လည်း မျက်​နှာ ကြည်​ပြီး make up ကို ပိုကြာရှည်​ခံပါတယ်​ တပုလင်းကို ၄ , ၅ ​ခေါက်​ထိ အသုံးပြုနိုင်​ပါတယ်​​နော်​.. ၁ ဗူးဆိုရင် ၃ လကျော်လောက်ထိ အသုံးခံပါတယ်
ဘယ်​လိုskin problem ​တွေအတွက်​ အသုံးပြုသင့်​လဲ?
မျက်​နှာမှာ ဝက်​ခြံ ဆိုးဆိုးရွားရွား ထွက်​​နေတဲ့skin
မျက်​နှာ breakouts ဖြစ်​ပြီး ထိထားတဲ့ skin
တင်းတိပ်​ အမဲစက်​ ဖြစ်​​နေတဲ့ skin
မျက်​နှာကို ကိုရီးယားမ​လေး​တွေလို ဝင်းပြီး ကြည်​ချင်​တဲ့သူ​တွေ အတွက်​ အထူးသင့်​​လျော်​ပါတယ်​
Facial skincare အတွက်သာမက
ဒဏ်ရာများအတွက်လဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ‼️
​နောက်​ဆုံး customer feedback အရ အခြားbrand ​တွေ မသုံး​တော့ဘဲ shenjing ရဲ့ Hyaluronic essence acid ကိုဘဲ ​ရွေးချယ်​ သွားပါတယ်​​နော်​
Haveahealthy skin with Shenjing
မန်း​လေး deli free
ရန်​ကုန်​ deli or စာတိုက်​ ဗိုလ်​တ​ထောင်​ deli free
ကျန်​မြို့များ ကားဂိတ်​ or စာတိုက်​
အမည်: Hyaluronic Acid